BUDDHIST TERMS' Dictionary: KING OF NIRAYA - ယမရာဇ
KING OF NIRAYA - ယမရာဇ
KING OF NIRAYA Yamarᾱja
ယမရာဇ - ယမမင်း၊ ငရဲမင်း၊ ဝေမာနိကပြိတ္တာမင်း။
ယမမင်းသည် အပါယ်ဘုံသားမဟုတ်။ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ နှစ်မျိုးရောစပ်ပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် စာတုမဟာရာဇ်ဘုံအပါအ၀င် ဝေမာနိကပြိတ္တာမျိုး၌ ဖြစ်ရသည်။ ရံခါ နတ်နန်း ဗိမာန် နတ်သမီး အခြွေအရံ ဥယျာဉ် ပဒေသာပင် စသော ကုသိုလ်အကျိုးကို ခံစား၍ ရံခါ အကုသိုလ်အကျိုးကို ခံစားရသည်။ အချို့သော ယမမင်းတို့ကား မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုပင် ရကြသည်။ မဂ်ဖိုလ်ရသည့်အခါမှစ၍ အကုသိုလ်ကံ၏ မကောင်းကျိုးကို မခံစားရတော့ချေ။
King Yama; Vemanika-peta
King Yama, King of Niraya, is not an inhabitant of the infernal regions. Asaresult of past deeds of merit mixed with evil deeds, he is reborn as one of the Vemᾱnika Petas who have their mansion in Catumahᾱrᾱjika, the lowest of the six deva realms. He enjoys the pleasures of the deva world, attended by celestial maidens, etc, and at other times, experi3ences the sufferings ofapeta. Some of the Yamarᾱjas attain Insight and Fruition (Magga and Phala) and realize Nibbᾱna. From the moment they attain Magga and Phala all resultants of evil action cease.